Ọkụkọ na blue cheese ihendori na osikapa - uzommeputa Como-Quiero - Como Quiero
Ọkụkọ na blue cheese ihendori na osikapa
400 grams Chicken (ara)
1/2 ị tablespoons Butter
2 ị tablespoons Olive mmanụ
1/4 Foto Ụlọ Nga Yabasị
1 keobere Ude
50 grams Blue cheese
1/2 ị tablespoons Pasili
1/4 teaspoons Nnu
1 tuo Ose
3/4 Foto Ụlọ Nga Osikapa
2 ị tablespoons Mmanụ
1/2 ị tablespoons Poppy osisi
Kwadebe Efrata: ezi mgbutu eyịm; Finely iri pasili; desmigajar cheese na idobere; see anụ ọkụkọ ka iha aha a obere akwụkwọ.
Iji kwadebe osikapa: na a ite, tinye ọkara nke sunflower mmanụ na wụsa osikapa. Saute ruo mgbe ọ fọrọ nke nta translucent. Mgbe ahụ tinye 1.5 cup esi mmiri maka na onye ọ bụla cup of osikapa, tinye nnu uto, ebido nwayọọ, cover na ebe n'elu obere okpomọkụ 20 nkeji na tosta. Ná ngwụsị oge, gbanyụọ okpomọkụ na-eche banyere 5 nkeji.
Ozugbo njikere, ịgbakwunye poppy osisi na ndị na-ewepụta.
N'ihi ihendori: Na a saucepan okpomọkụ na butter na fọdụrụ mmanụ n'elu usoro okpomọkụ, tinye na yabasị na esi nri maka 3-4 mins, bụghị browned .. Tinye mmiri ara ehi, roquefort cheese na pasili; salpimentar.
Ose anụ ọkụkọ ka uto (nnu, ose). Na a na-ekpo ọkụ frying pan, na nri ọkụkọ ebe ihe dị ka ọkara a nkeji na onye ọ bụla n'akụkụ ruo oru n'elu. Ekpuchi pan, belata okpomọkụ na otú ahapụ 10 nkeji (na-enweghị mmalite n'elu (n'ime) gburugburu, ma ọ bụ gbanwee ọkụ).
Gbanyụọ okpomọkụ na, na-enweghị igwupụta, na-ahapụ ihe karịrị 10 nkeji ekpe esi nri na uzuoku e dum n'ịkpa n'elu (n'ime) gburugburu.
Cover na cheese ihendori na-eje ozi na osikapa.
* Nyefee. 593 kcal, 30% nke 2,000 kcal / p tụrụ aro otu ụbọchị
30% Abuba 30%
30% Cholesterol 71%
30% Carbohydrates 8%
30% Mineral 23%
30% Protein 128%
30% Vitamin 19%
Tozuru usoro uzommeputa a
Kedu ihe ị chere gbasara uzommeputa a?
Bụrụ onye izizi ikwu na uzommeputa a!
Seenhụla menus anyị?
Achọrọ m ya na menu m
Ntụziaka agbakwunyere na ọkacha mmasị gị
Ntụziaka agbakwunyere na menu gị
Ibido inya moto ezigwa NchNhr m Ndepụta ịzụ ahịa Ọkacha mmasị.